တပ်အားကစား | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
1 ဖော်မြူလာ၏ကားသည်“ 1 ဖော်မြူလာ၏ကားတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာမှဒေါ်လာတစ်သန်းအထိစျေးနှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်သည်” - ယင်းသည်လိမ်လည်လှည့်စားမှုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာမာရီယာမော်ဂန်ကကျွန်ုပ်အားတိုက်ရိုက်ပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကျော်ကြားဆုံးပုံသေနည်း driver - 1 ယခုသူသည် Schumacher ဖြစ်သည်။ နောက်မျိုးဆက်ရှိလူများတွင်အခြားရုပ်ပုံများရှိသည် - Alain Prost, Ayrton Senna ။ Senna Aerton Senna (90x အလယ်အထိ) နောက်ပိုင်း - Schumacher ယေဘုယျအားဖြင့် Schumacher ...
slalom ကဘာလဲ? Word - SLALOM: အားကစား၌ - ပေးထားသောအကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မြန်နှုန်းမြင့်အသွားအလာ။ andရာနှင့်sရာ s ကို။ ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းကိုဆင်းနှင်းလျှောစီး။ ရေနှင်းလျှောရွာ ကောင်းကင်က c ။ အပေါ် ...
ကားကိုပုံသေနည်း၏ kakya အများဆုံးမြန်နှုန်း 1
Sportbox.az 1 ကီလိုမီတာအပေါ်ဖြောင့်ဘာကူ Bottas တစ်လိုင်းပေါ် GrandPrix247 ကိုးကား. သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကား 2,2 ဖော်မြူလာ၏ kakya အများဆုံးမြန်နှုန်း km / h 378 မှလူစုခွဲ။ ယခင်စံချိန်ပြိုင်ကားခဲ့ပါတယ် ...
0113 - ဝင်ပေါက်လေထုအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ output ကိုအဆင့်။
0113 - စားသုံးမှုလေထုအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊ "Boshevsky" DMRV တွင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ သင့်ရဲ့အခြေအနေမှာပုံအတူတူပါပဲ အမှားနှစ်ခုတက်ပြီး DMRV ဖြစ်လျှင် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 2,293 စက္ကန့်ကျော် Generate ။